Soo Iibso Jilib Sawir gacmeed Sawir gacmeed hufan oo Biyo-la'aan ah - Maraakiib Bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Guluub Sawir gacmeed Biyo-Bixiye ah
$ 10.99 qiimaha joogtada ah $ 25.99
Guluub Sawir gacmeed Biyo-Bixiye ah gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Jeelka sunnaha
Lambarka Moodalka: BX23
Faa'iido: Muddo-dheer, Fudud Oo Xidho
Nooca: Wanaajinta Baabiyaha
Qalabka sunniyaha: Qaabaynta suniyaha muddada dheer
Muuqaal: Saabuun sunta jel, jel sunnayaasha biyuhu, Xardho suni
Saamaynta Transparent: Saamayn kuma yeelanayso qurxinta Waa midab la'aan iyo hufnaan aan badali doonin midabka sunnaha iyo midabka ku xiraya jilaalka, ma leh keega mana iftiin doono iftiinka markuu qallalo.
Biyo-la’aan: Biyo-ilaaliye iyo dhidid-u adkaysi uma yeesho. Xitaa markaad ordo iyo dabaasha. Cabsi laga qabo dhidid, biyo-la'aan, dhidid-caddayn, iyo saliid-caddayn.
360 ° Madaxa Caday Cufan: Madaxa burushka jilicsan ayaa si adag u qabta jelka, burushka dhaadheerna wuxuu si fudud u caday karaa qurxinta iyo baalasha sunnayaasha qaabeysan.
Qalajinta Degdegga ah: Dhaqaajinta degdegga ah oo aan ku dhegin sameynta dhaqso-u-qalajinta waxay sameyn kartaa filim ka dib sugitaanka 1 daqiiqo illaa 2 daqiiqo.
Amaan & Dabiici: Badeecadani waxay ka samaysan tahay qalab khafiif ah oo aan xanaaq lahayn. Qaaciddada dabiiciga ah iyo tan dabiiciga ah waxaa loogu talagalay gaar ahaan baalashada. Ma keeni doonto cuncun, ama kama tagi doonto hadhaaga loo baahdo daaqadaada.
Tallaabada 1: Dib-shanleetiga ah ku xoqin spoolie si aad u dhaqaajiso oo u qalajiso 20 ilbidhiqsi. Haddii aad rabto inaad si dhakhso leh u qalajiso waxaad isticmaali kartaa fartaada riix.
Tilaabada 2: Timaha kor ugu cadayo kor ilaa xididka ilaa caarada qaybo yaryar oo leh BANXEER Brow Glue oo waad dhamaysay
Mahadsanid, wax walba way yimaadeen, hadda waan isku dayi doonaa.
si wanaagsan la sameeyey
Wax walba waa hagaagsan yihiin! Ka soo hormaray sidii la filaayey! Mahadsanid!
Si qurux badan ayaa loo buuxiyay, waxyar ayaa ur u ah xabagta, si fiican, markaa sunnayaasha waxay u jiifaan uun dab. Waxaa jira wax diidmo ah: ka dib markii la mariyo jelladaha, sunnayaasha si doqonnimo ah ayaa loo adkeeyay markii aad suuxsaneyso sunnayaasha jellada kadib, waxyaabaha cad ayaa lagaa saarayaa. Oo markaa waa caadi).
Jelku waa caadi, xirxirashadu way wanaagsan tahay. Qurxinta dukaankaan waa tayo. Fixation waa dhexdhexaad, waxay leedahay wax yar oo Pearl ah